Anger at Work and how to manage it. ﻿
Anger at Work and how to manage it.
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဒေါသများနှင့် ၄င်းကို ဘယ်လို စီမခန့်ခွဲမလဲ
Career Success အတွက် ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက အများကြီးရှိတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ညိုလဲ့က လုပ်ငန်းခွင်မှာဒေါသထွက်ပြီး အမှားလုပ်မိတာက အဆိုးဆုံးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ ညိုလဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ Part 1 ထဲကခေါင်းစဉ်ထဲက Anger at work and how to manage anger at work ဆိုတာကို ညိုလဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်။
အဲ့တော့ ညိုလဲ့စပြီး ပြောချင်တာက ၄၅% သောဝန်ထမ်းတွေက လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒေါသထွက်လေ့ရှိကြတယ်။ အဲ့လိုဒေါသထွက်ရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကကတော့ အများကြီးပဲ။ မိမိရဲ့ အထက်လူကြီးကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ မိမိလုပ်ရပ်ကို appreciation မလုပ်လို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ မိမိရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ် ဒေါသထွက်စေမယ့် အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ အဆိုးဆုံး ၃ ခုရှိတယ်။
ပထမတစ်ချက်ကတော့ မိမိက အော်တတ်တဲ့သူ၊ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောတဲ့သူ၊ teamwork နဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့သူ၊ အပြစ်ပြောဖို့ဘဲသိတဲ့သူ၊ ခြိမ်းခြောက်တတ်တဲ့သူ ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရုံးပစ္စည်းတွေကို ပစ်ပေါက်တတ်တဲ့သူ၊ နောက်ပြီး မိမိက အမှားမလုပ်ပဲ Management ကို သူကအမှားလုပ်တဲ့အတွက် အလုပ်ထုတ်သင့်ပါတယ်လို့ ညာပြီးပြောတတ်တဲ့သူ၊ မိမိထက်ရာထူးငယ်တဲ့သူတွေက သင်ပေးတာကို မလိုက်နာဘဲ လုပ်ချင်တာလုပ်တဲ့သူ၊ unhealthy competition နဲ့ ပြိုင်တဲ့သူ စတဲ့ သူတွေနဲ့ အလုပ်အတူတူလုပ်ရတဲ့အခါ Stress တွေရပြီး ဒေါသတွေထွက်တတ်ပါတယ်။ ဒါက လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဒေါသဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာအချို့ပါ။ အဲ့လိုဒေါသတွေထွက်ပြီး Conflict တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်သူမဆို တော်တော်များများက Management ကို တိုင်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် HR Department ကို တိုင်မယ်။ အဲ့လို စိတ်ဆိုးပြီး တိုင်တာက မှန်ကန်သင့်လျော်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့လိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ အဲ့လူအတွက် ဘောင်တစ်ခုထားလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ မိမိက အဲ့လိုအပြုအမူတွေကို သည်းခံပြီး နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အပြုအမူကို အဲ့လူသိအောင်လုပ်ပါ။ အခုပြောနေတာကတော့ ဒီအခက်အခဲကို ကျော်လွှားရမယ့် နည်းဗျူဟာကို ပြောနေတာပေါ့နော်။
Boundary သတ်မှတ်ရမယ့် နည်း ၂ နည်းရှိတယ်။
ပထမတစ်ချက်က မိမိ သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ အပြုအမူတွေကို စာရင်းလုပ်လိုက်ပါ။ ညိုလဲ့တို့က Physical အရ ထိခိုကစေမယ့် အရာတွေကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို protect လုပ်ဖို့ နည်းလမ်းကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ကြတယ်။ ဥပမာပြောရရင် မိမိကို လူတစ်ယောက်ကရိုက်မယ်ဆို ရိုက်ရဲရိုက်ကြည့် ရိုက်လိုက် မရဘူး စသဖြင့် ကာကွယ်ပြီး ဖြေရှင်းကြတယ်။ အဲ့တော့ ကျမကို အဲ့လို အောင်စရာမလိုဘူး။ list ထဲမှာ team work နဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့သူပါလို့ ဒေါသထွက်ခဲ့ရင်လည်း To Do List ကို လုပ် Responsibilities ကို ခွဲ၊ workdone ကို checking လုပ်ပြီး မိမိလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် workdone မဖြစ်ပဲ ပူးပေါင်းလက်တွဲမလုပ်ကိုင်တာကို နားလည်အောင် ရှင်းပြ။ အဲ့လို Boundry မသတ်မှတ်ပဲ နေမယ်ဆို ဒေါသတွေထွက်လာမယ်။ ဒေါသထွက်တိုင်း Management နဲ့ HR Department ကို report တင်ပြီး ပြသနာကို မဖြေရှင်းပါနဲ့။ Management နဲ့ HR Department ကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ် အတွက် သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေကို မဖြုန်းပါနဲ့။ ဥပမာ မိမိကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က အော်ပြီး ရန်ဖြစ်သလိုပြောနေတယ်ဆိုရင်လည်း မိမိက ၁၅ စက္ကန့်လောက် အသက်ရှုမယ်။ ပြန်မအောင်ဘူး။ Boundry စသတ်မှတ်မယ်။ ပြီးရင် အစ်ကို အခုကိစ္စက ဖြေးဖြေးပြောလို့ရတယ်။ အစ်ကို့အသံ ကျယ်လာတာကို သတိပြုမိလား စဖြင့် ဖြေရှင်းမယ်။ မိမိရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို လည်း သူ့ရဲ့ ဒေါသကို သတိထားမိပြီး Emotion ကို control လုပ်နိုင်အောင် ကူညီပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ ဒီ strategy လေးကို သုံးမယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ anger လည်း မဖြစ်ဘူး။ မိမိရဲ့ colleages ကို လည်း ကူညီပြီးသားဖြစ်သွားပြီး career success ကိုလည်း မထိခိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။
ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ ဒေါသထွက်စေနောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းက သူသူကို လက်ညှိုးထိုးခံရင်း၊ မိမိအတင်းပြောခံရရင် အရမ်းစိတ်တိုပြီး ဝုန်းဝုန်းဒိုင်း နဲ့ ဒေါသတွေ ပေါက်ကွဲတော့တာပဲ။ အဲ့လိုမျိုး ဖြစ်တဲ့အခါ “ Let’s HaveaTalk” ဆိုတဲ့ နည်းလေးကို သုံးပါ။
ဥပမာ။ ဒီ Gossip ကို ကြားတယ်။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ မေးမယ်။ အဲ့အတွက် မိမိဘယ်လို ခံစားရတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဘဲလုပ်ချင်တဲ့အတွက် မကျေနပ်တာ မကြိုက်တာ ရှိရှင်ပြောဖို့။ Gossip နဲ့ပက်သက်ပြီး နောက်တစ်ခါမကြားချင်လို့။ ပြောစရာရှိရင် မိမိကို တိုက်ရိုက်လာမေးပြီး ဖြေရှင်းဖို့။ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကိုပဲ လိုအပ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးပါဆိုပြီး ပြောပါ။ အဲ့ဒီ Conversation မစခင် အရင်ဆုံး မိမိ ဘာပြောချင်တာလဲ၊ အဲ့အတွက် မိမိဘာတွေခံစားရပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ Uncomfortable မဖြစ်တာလဲ။ ဘာပြောရမလဲဆိုတာကို သိပြီးရင် ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပြီး Meeting Request လုပ်ပြီး
နံပါတ်သုံးက ဘာလဲဆိုတော့ တစ်ချို့သူတွေက passive anger ရှိကြတယ်။Passive Anger က ဘာလဲဆိုတော့ ပြန်မပြော နားမထောင် ။ ပြန်မပြော နားမထောင်နဲ့ လုပ်တတ်တဲ့သူနဲ့ အလုပ်လုပ်ရရင်လည်း အရမ်းစိတ်တိုရတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အပြုအမှုကလည်း ဆိုးပါတယ်။ အဲဒါက ကလေးဆန်တဲ့အပြုအမူလို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲ့လို လုပ်တဲ့ သူနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် ဒေါသထွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး အဲ့လူကို လစ်လျူမရှုပါနဲ့။ အဲ့လူဘာတွေမကျေနပ်တာလဲ၊ အဲ့မကျေနပ်တဲ့အပြုမှုကြောင့် မိမိ လုပ်ငန်းခွင်မှာ comfortable မဖြစ်တဲ့အကြောင်း မကျေနပ်တာကို ထုတ်ပြီး ပြီး ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း။ စိတ်ကောက်ဖို့ မလိုကြောင်း ၊ မိမိက အရမ်းတော့ စိတ်ရှည်ရမယ်။ စိတ်အေးအေးထားပြီး Open Discussion လုပ်နိုင်အောင် လမ်းကြောင်းပေးထားရမယ်။ အဲ့ဒါကတော့ တတိယအချက်အတွက် ဒေါသထွက်စေတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ဒေါသကို manage လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေပါ။ အခုရေးသားဖော်ပြပေးခဲ့တာတွေက JobsInYangon.Com ရဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။